एल क्लासिकोः रियललाई बदला लिने मौका, रोक्ला बार्सिलोनालाई ! | Hamro Khelkud
एल क्लासिकोः रियललाई बदला लिने मौका, रोक्ला बार्सिलोनालाई !
एजेन्सी – स्पेनिस फुटबलको मात्र नभएर विश्व फुटबलमै चर्चित रहेको ‘एल क्लासिको’ अर्थात रियल म्याड्रिड र बार्सिलोनाबीचको महत्वपुर्ण खेल हुँदैछ ।
खेल रियलको घरेलु मैदान सान्टियागो बर्नबेउमा आज राति १ः३० बजेपछि शुरु हुनेछ । पछिल्लो एक सातामा रियल र बार्सिलोना दोस्रो पटक आमने समाने हुन लागेको हो । समग्रमा यो सिजन यो चौथो भेट हो । जसमा २ हार र एक बराबरीको नतिजा रहेको छ ।
पछिल्लोपटक रियल र बार्सिलोनाले स्पेनिस कोपा डेल रे अन्तरगतको दोस्रो लेगमा प्रतिस्पर्धा गरेको थियो । जसमा बार्सिलोना ३–० ले विजयी भएको थियो । त्यसअघि यि दुई टोलीले कोपा डेल रे कै पहिलो लेगमा १–१ को बराबरी खेलेका थिए ।
यि दुई टोलीबीचको खेल निकै प्रतिस्पर्धात्मक र रोमाञ्चक हुने अपेक्षा गरिएको छ । घरेलु टोली रियल अघिल्लो साता आफ्नै मैदानमा बेहोरेको हारको बदला लिने लक्ष्यसहित मैदान उत्रनेछ । यस्तै रियल बार्सिलोनालाई हराएर उपाधि होड कायम राख्न चाहन्छ । तर, ला लिगामा बार्सिलोनाविरुद्धको पछिल्ला पाँच खेलमा रियलले बार्सिलोनालाई पराजित गर्न सकेको छैन । जसमा दुई बराबरी र ३ हारको नतिजा छ ।
त्यसैले पनि रियल यो सिजनको चौथो भेटमा बार्सिलोनालाई हार चखाउने योजना बुन्नेछ । रियलसँग युवा फरवार्ड भिनिसियस जुनियर, ग्यारेथ बेल, करिम बेन्जेमा, मार्काे एसेन्सियो, टोनी क्रुस, लुका मोड्रिच, क्यासमिरो र लुकास भास्क्वेज जस्ता खेलाडीहरु रहेका छन् । तर, रियलले यो सिजन सोचेअनुरुपको प्रदर्शन गर्न सकेका छैनन् । अन्य भन्दा पनि रियल डिफेन्समा निकै कमजोर देखिएको छ । यसलाई सुधार्न सके रियलले बार्सिलोनालाई पराजित गर्न सक्ने क्षमता राख्दछ ।
तर, बार्सिलोनाको चुस्त फरवार्ड लाइन रोक्न रियललाई कठिन हुनेछ । कप्तान लियोनेल मेस्सी, लुइस स्वारेज, औसमाने डेम्वेले र फिलिपे कौटिन्होजस्ता खेलाडीले जुनसुकै बेला पनि गोल गर्न सक्ने क्षमता राख्दछ ।
यता, अघिल्लो सातामा निकालेको जितको लयलाई निरन्तरता दिने योजनामा मैदान उत्रनेछ । बार्सिलोना ला लिगाको उपाधि होडलाई थप बलियो बनाउन चाहन्छ । ला लिगामा बार्सिलोना पछिल्ला १३ खेलमा अपरािजत छ । जसमा १० जित र ३ बराबरीको नतिजा छ । बार्सिलोनालाई मेस्सी ‘एल क्लासिको’ को सर्वाधिक गोलकर्ता (१८) गोल र लुइस स्वारेजको साथ छ । बार्सिलोनाले ला लिगामा रियलविरुद्धको पछिल्लो सबै २२ खेलमा गोल गर्न सफल भएको छ । यसैले पनि बार्सिलोना रियलमाथि हावी हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
ला लिगाको २५औं चरणको खेल सकिँदा बार्सिलोना ५७ अंकसहित शीर्ष तथा ४८ अंकसहित रियल तेस्रो स्थानमा रहेको छ । रियल बार्सिलोनाभन्दा ९ अंकले पछि छ । बार्सिलोनाले रियललाई पराजित गरे दोस्रो स्थानको एट्लेटिकोसँग १० अंकको तथा रियलसँग १२ अंकको अग्रता बनाउनेछ । बराबरी या हारले पनि बार्सिलोना शीर्षस्थानमा नै रहनेछ । यता, रियलले पराजित गरे बार्सिलोना र एट्लेटिकोसँगको अंक दुरी कम गर्नेछ ।